Ubunewunewu, indawo yasemaphandleni enendawo yokuhlala kufutshane neBedford - I-Airbnb
Ubunewunewu, indawo yasemaphandleni enendawo yokuhlala kufutshane neBedford
Renhold, England, United Kingdom
Uphononongo lweenkwenkwezi ezintlanu... ikhaya elinoxolo eligcinwe kweyona ndawo indala yaseRenhold, eBedford.
Ecaleni kwendlu yethu efulelwe ngengca kunye negadi enoxolo eyenzelwe wena kunye nokuhamba kwelizwe okuhle, uya kuziva usekhaya kumbindi welizwe. Indawo yokupaka ikufuphi neshedi.
Ufumana isihlomelo kuwe, kunye neWiFi, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, igumbi lokuphumla elivulekileyo kunye nendawo yokutyela. Igumbi lokulala eliphindwe kabini libandakanya i-smart TV, amashiti amatsha, iitawuli kunye ne-ensuite.
Siyavuya ukuba usebenzise igadi yethu esecaleni kwaye ubeke itafile ye-bistro kunye nezitulo (ezibandakanyiweyo kwifoto) ukuze utye i-alfresco ukuba uyathanda. Yindawo ekhuselweyo ngokwenene ukubamba ukukhanya kwelanga. Le gadi ibiyelwe kwigadi yethu engundoqo kodwa nceda uzive ukhululekile ukuzulazula. Kukho imifuno emitsha ekhulayo kunye ne-BBQ emangalisayo ukuba ungathanda ukuyisebenzisa.
Nceda uqaphele amadada ethu asimahla, iinkukhu kunye neenyosi kwaye usibuze ukuba ungathanda ukuzondla (sinokutya okukhethekileyo!).
4.98 · Izimvo eziyi-152
Ngokulula kwesikhululo saseBedford simalunga neekhilomitha ezi-3 kude noololiwe abakhawulezayo ukuya eLondon (imizuzu engama-45 ukuya eSt Pancras), i-A421 ikhonkco leMilton Keynes kunye ne-A1/ M1 indlu yethu ibekwe kakuhle ukuba ihlole iBedford nangaphaya. Iyunivesithi imalunga nemizuzu eli-10 ukusuka apho.
We are Jenny and Chris. We love to travel and designed our place so that you can stroll through the door and have everything you need for a great stay.
Sihlala ecaleni kwesihlomelo ngoko sihlala sisandla sokuphendula imibuzo, ukuba akunjalo, sihlala sisekupheleni kwefowuni!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Renhold